Xiisad saakay ka taagan duleedka Kismaayo
Home Somali News Xiisad Saakay ka Taagan Duleedka Kismaayo
Xiisad dagaal ayaa saakay ka taagan deegaanka “Cabdalle Biroole” ee duleedka magaalada Kismaayo, kadib markii shalay halkaas dagaal uu ku dhexmaray dadka deegaanka iyo Al-shabaab.
Xiisada ayaa dhalatay kadib markii Al-shabaab dadka deegaanka ay ku amreen ineey bixiyaan Sakada, halka dadka deegaankana ay sheegeen ineey horay u bixiyeen.
Mid kamid ah dadka deegaanka oo warbahinta lahadlayay ayaa waxa uu sheegay shalay uu deegaanka C/lle Biroole dagaal xoogan ku dhexmaray dadka deegaanka iyo Al-shabaab, waxa uu sheegay in Shabaabku ay dadka ku qasbayeen ineey bixiyaan Sako qasab ah, laakiin ay ka biyo diideen shacabka halkaas ku dhaqan.
Sidoo kale goob jooge ayaa sheegaya in saakay labada dhinac ay ku jiraan diyaar garoow dagaal, lana filan karo Saacadaha soo aadan inuu dagaal ka dhex qarxo.
Ma ahan markii ugu horeesay ee uu dagaal dhexmaro dad Sahacab ah iyo Al-shabaab oo iyagu cadeystay cadaadinta iyo goowaraca dadka, waxaana jiray dhowr dagaal oo ay shacabka lagaleen kuwaasoo u adkeeysan waayay gumeysiga iyo caburinta Shabaab.